- အိန္ဒိယရှိအကောင်းဆုံးကြွေပြားများကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Matrix Cera
800 x 1600 မီလီမီတာ 1200 x 1200 မီလီမီတာ 1200 x 2400 မီလီမီတာ
600 x 600 မီလီမီတာ 600 x 1200 မီလီမီတာ
300 x 300 မီလီမီတာ 400 x 400 မီလီမီတာ 600 x 600 မီလီမီတာ
300 x 450 မီလီမီတာ 300 x 600 မီလီမီတာ
Matrix Cera အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Moribi, Gujarat တွင်အခြေစိုက်သည့် ဦး ဆောင်သည့်အုပ်ကြွပ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ,. ကြွေထည်များ, ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်များ, GVT / PGVT TILES များ, ကားချပ်အုပ်ကြွပ်များ,.
၎င်း၏ရူပါရုံသည်ဖောက်သည်များနှင့်အပေါင်းအသင်းများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်. စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များဖြင့်0န်ဆောင်မှုပေးလိုသည်.
စီးပွားဖြစ် area ရိယာ ပိုပြီးရှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကားရပ်နားသည့်အုပ်ကြွပ်များသည်လေးလံသောနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုများဖြစ်ပြီး,. ကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့်ခွန်အားကသူတို့ကိုအားကောင်းစေပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကားရပ်နားရန်နေရာများသည်အလွယ်တကူအက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ.
ကြွေကြွေပြားများသည်ပုံမှန်ကြွေထည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်. ဤသည်ပရီမီယံအရည်အသွေးပြည့်ဝသော tile သည်လူနေအိမ်ရာနှင့်စီးပွားဖြစ်နေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကြွေကြမ်းကြမ်းခင်းကြွေပြားများနှင့်အတူသင်သည်သင်၏အာကာသကိုအစွမ်းသတ္တိနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်မှုအားဖြင့်လှပသောကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ကြီးမားသောချထားတဲ့ကြွေပြားများကိုယခုအချိန်တွင်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်. ၎င်းတို့ကိုရေချိုးခန်းများ, မီးဖိုချောင်များ, ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်အလုပ်စားပွဲများအပါအ0င်အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်. သူတို့ရဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ကြွေထည်ပစ္စည်းကသူတို့ကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပြီး install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်.
သင်သည်သင်၏တည်နေရာကိုယူနီဖောင်း, ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်သန့်ရှင်းရေးကြည့်ရှုလိုပါက,. ဤအုပ်ကြွပ်များသည်စုစုပေါင်းအထူတွင်အရောင်အသွေးပေါ်တွင်အရောင်အသွေးရှိပြီးအလွန်ချစ်ပ် - ခံနိုင်ရည်နှင့်ခြစ်ရာခံနိုင်သည်.
Washroom နှင့်အိမ်သာများကိုအငြင်းပွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူပိုမိုအဆင်ပြေသည်. ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီးနှစ်သက်ဖွယ်သန့်ရှင်းသောသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များရှိသည်။.
Tilesview သည်သင်၏နေရာကိုမြင်ယောင်ရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော application တစ်ခုဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုသရုပ်မှန်သို့ယူဆောင်လာရန်ယုံကြည်သည်. စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်စီမံကိန်းများအတွက် 3D tile visualizer ကို သုံး. နံရံများနှင့်ကြမ်းခင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကြွေပြားများနှင့်ကြမ်းပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကြွေပြားများနှင့်ကြမ်းပြင်များအတွက်ရွေးချယ်ပါ.
အဓိကထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူအမြောက်အများစုဆောင်းထားသောမြေကြွေထည်များစုဆောင်းခြင်း, GVT, RACCELAIN, ကြီးမားသော SLAB,.
(တင်ပို့မှုဌာန Matrix Cera Enamel Co.)
visualizer ၏ adavtage ယူပါ